ဝက်ဘ်ဆိုက်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ site ၏အမျိုးမျိုးသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း, ဒါမှမဟုတ်သင်နဲ့တခြားလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ (ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်ဖြင့်အဖြစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးလ်, သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်). ဥပမာ, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site အချို့အားဝေမျှသုံးစွဲနိုင်ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်အခါသင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးပေးဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်, သတင်းလွှာသို့မဟုတ်စာပေးပို့အဘို့အ sign up ကို, သို့မဟုတ်တစ်ဝယ်ယူစေ.
ကျနော်တို့စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးအဆိုပါအမျိုးအစားသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအမည်များမှာ, အီးမေးလိပ်စာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ, နှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်.
သင်တစ်ဦးက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ, သငျသညျအခြို့သောသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်, ထိုကဲ့သို့သောသင်၏အင်တာနက်ပရိုတိုကောအဖြစ် (အိုင်ပီ) လိပ်စာနှင့်သင့်အလည်အပတ်ခရီး၏အချိန်. ဤ site, တခြားဆိုဒ်များကဲ့သို့အ, ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှလာရောက်လည်ပတ်သူအကြောင်းကိုဒီအခြေခံသတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်.
(က c) “ကွတ်ကီး”:
ကွတ်ကီးတစ်ဦးကို web server ကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုလွှဲပြောင်းဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်းများမှာ.
ကျနော်တို့ဧည့်သည်ဦးစားပေးသိမ်းဆည်းထားကွတ်ကီးကိုသုံးပါ, စံချိန် session တစ်ခုသတင်းအချက်အလက်များ (ထိုကဲ့သို့သောသင်သည်သင်၏စျေးဝယ်လှည်း add ကြောင်းပစ္စည်းများအဖြစ်) အဘယ်အရာကိုစာမျက်နှာများတွင်သုံးစွဲသူများသည်လက်လှမ်းသို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်စံချိန်အသုံးပြုသူ-တိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှပြန်လာသည့်အခါကျွန်တော်ငှါထင်အသစ်ဒေသများသို့သတိပေးချက်ဧည့်သည်ထိုသူတို့အားအကျိုးစီးပွားဖြစ်, ဧည့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှပြန်လာသည့်အခါပိုမိုကောင်းမွန်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် site တစ်ခုမှာစံချိန်အတိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဧည့်သည်များအကြိမ်ကြိမ်အတူတူပင်နဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာကိုစလှေတျတျောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်, နှင့်ဧည့်သည်များပေါ်တွင်အခြေခံ web page ကိုအကြောင်းအရာစိတ်ကြိုက်’ ဘရောက်ဇာအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ဧည့်သည်ပို့ပေးအခြားသတင်းအချက်အလက်များ.
အများစုမှာ browser များ cookies တွေကိုလက်ခံဖို့ကို set up နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကအသစ်တခု cookie ကိုခံယူသို့မဟုတ်သင် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ရန်သင့် setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်တဲ့အခါမှာသင့် browser ကိုသင်အကြောင်းကြားရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့ settings ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
3. မည်သို့နှင့်တဲ့အခါမှာပြန်ကြားရေးအသုံးပြုနေသည်. ကျနော်တို့စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များအောက်ပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်:
(တစ်ဦး) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏ content တွေကိုတိုးတက်စေရန်;
(ခ) တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဧည့်သည်များအတွက်အကြောင်းအရာနှင့် / သို့မဟုတ် site ကိုစာမျက်နှာအပြင်အဆင်ကိုစိတ်ကြိုက်ရန်;
(က c) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web site ကိုမှအပ်ဒိတ်များအကြောင်းစားသုံးသူအကြောင်းကြားရန်အသုံးပြု;
(ဃ) သူတို့ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စားသုံးသူကိုဆက်သွယ်ကူညီပေးဖို့တခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ shared;
4. ကျနော်တို့သင့်ရဲ့ပြန်ကြားရေးကာကွယ်ပါဘယ်လို. သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတွေရဲ့ privacy နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်. ကျနော်တို့တခြား web site များနှင့် ဆက်စပ်. ၌အကြှနျုပျတို့၏န်ဆောင်မှုအချို့ကိုပူဇော်. အဆိုပါဆက်နွယ်က်ဘ်ဆိုက်များကွဲပြားခြားနားသော privacy ကိုအလေ့အကျင့်ရှိစေခြင်းငှါငါတို့သည်လည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးမူဝါဒများဖတ်ရှုဖို့သငျသညျအားပေး. အခြို့သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကြောင်းအရာရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်သောစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားဖြစ်ပါသည်. ငါတို့သည်သင်တို့အဘယ်သူကိုမျှရန်သင့်စကားဝှက်ကိုထုတ်ဖော်မအကြံပေး. ဖြည့်စွက်ကာ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ session ရဲ့အဆုံးမှာသင်ကစကားဝှက်ကို-protected န်ဆောင်မှုများထွက်လက်မှတ်ထိုးအကြံပြု. သင်ဆန္ဒအလျောက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ချက်တင်ဒေသများရှိကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်လျှင်သတိထားပါဖြစ်သင့်, သတင်းအချက်အလက်လူသိရှင်ကြားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နှင့်စုဆောင်းအသုံးပြုသောတတိယအုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမပါဘဲနှင့်အခြားတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တတိယပါတီများအနေဖြင့်မလိုလားသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်ပေါ်စေမည်နိုင်ပါသည်. ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဤမူဝါဒကျော်လွန်များမှာ.
5. ပြန်ကြားရေးမှ Access ကိုရှိထားသူကားအဘယ်သူ. ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်. သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖို့ Access ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသူကိုတတိယပါတီများမှပေးစေခြင်းငှါ. ဖြည့်စွက်ကာ, ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရောင်းချသို့မဟုတ်မဝယ်စေခြင်းငှါ, ပေါင်းစည်းသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်. ထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ, user information များကိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါ. ငါတို့သည်လည်းတရားရုံးအမိန့်မှတုန့်ပြန်သင့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပညတ်တရားအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သည်ယုံကြည်လာသောအခါငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ခြင်းငှါ. ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်လိုအပ်သောကြောင့်ယူဆပါသည်အခါတိုင်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုအရန်နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များထံကြွေးခြင်းငှါပမာဏများစုဆောင်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်. သင့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့ကြိုတင်ထုတ်ဖော်ရန်အသိပေးစာအားဖြင့်သင်တို့ကိုမပေးစေခြင်းငှါ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ.
6. ကျနော်တို့သင့်ရဲ့ပြန်ကြားရေးကာကွယ်ပါမှသုံးပါနည်းလမ်းများ. ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံး. ဖြည့်စွက်ကာ, ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များအုပ်ချုပ်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုများအတွက်အခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်နေကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်မှဝန်ထမ်း access ကိုကန့်သတ်ရန်, နှင့်ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်များမှဤကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ထုတ်ဖော်န့်သတ်ရန်.
7. ကလေးများ. ဒီ website ၏နှစ်အောက်ကလေးများန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ရောင်းထုတ်ကုန်များကိုမပါဘူး 18. ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လျှင်ကျနော်တို့၏နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးအနေဖြင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိပါပြီ 18 ဤမူဝါဒ၏ချိုးဖောက်မှုအတွက်, ကျွန်တော်ချက်ချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့၏နှစ်အောက်မည်သူမဆိုထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်ရရှိထားယုံကြည်ပါ 18, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
8. သင်ကသင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူသုံးရန်နိုင်ပုံ. သငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ကို e-mail ကိုပို့ကိုထိန်းသိမ်းထားအားလုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်တညျ့တိရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ပူဇော်. သငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ကို e-mail ကိုပို့ဤအချက်အလက်တညျ့ရှိသည်ဟုနိုင်ပါတယ်.